Lionel Messi meriri Ballon d'Or nke isii - VIDIO - TELES RELAY
Lionel Messi meriri Ballon d'Or nke isii - VIDEO
By TELES RELAY On Dee 22, 2019
Star Messi Lionel Messi meriri Balen d'Or Award maka ọkpụkpọ kacha mma nke afọ maka afọ 2018-19. Ndekọ a maka ọrụ Messi bụ onyinye nke isii nke Balen d'Or. Messi meriri nturu ugo nke mbụ ya kemgbe 2015. O jisiri ike merie ihe mgbaru ọsọ 54 maka klọb na mba na 2018-19. Nnukwu ọrụ ya nyere Barcelona aka inweta mmeri nke Spanish La Liga Football League. Messi ahapụla Virgil van Dijk nke Liverpool. Star Cristiano Ronaldo nke Portugal na Yuvents mechara nke atọ n'ọsọ mmeri.
Nke a vidio pụtara na mbụ https://www.youtube.com/watch?v=OZb2jeKHiJA
9 androidangelina joliearafataubameyangBallonbọmbụ ọlaedo 2018enweyonce knowlesogwe aka
India: Onye ngosi RJD gosipụtara megide CAA kpasoro Bihar, ndị mkpọrọ 1 | Akụkọ India
Footkwụ: Seri Jean-Michaël chọrọ ịhapụ Turkey maka ụgwọ akwụghị ụgwọ